Kuboshwe amadoda angu-6 lapho kuqhubeka khona inkomfa ye-ANC etholakala nesibhamu esebiwe | News24
Kuboshwe amadoda angu-6 lapho kuqhubeka khona inkomfa ye-ANC etholakala nesibhamu esebiwe
Johannesburg – Amaphoyisa abophe amadoda ayisithupha endaweni yokupaka izimoto ngaphandle kwaseNasrec, eGoli, lapho kubanjelwe khona ingqungquthela yokuqokwa kobuholi.
Okhulumela amaphoyisa kuzwelonke uBrigadier Vishnu Naidoo uthe amaphoyisa abenza umzungezo owejwayelekile ngaphandle kwale ndawo ngoMgqibelo, ngesikhathi ezithela phezu kwamadoda ayisithupha abephuza utshwala endaweni yokupaka izimoto.
OLUNYE UDABA: Kuboshwe owe-ANC ngokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni
"NgoMgqibelo ntambama amaphoyisa abeqhuba umsebenzi wawo owejwayelekile ngesikhathi ebona amadoda ayisithupha ephuza utshwala, abe esenquma ukuya kuwo athi uma ewasesha kwatholakala isibhamu esabikwa ukuthi silahleke eKliptown," kusho uNaidoo.
Uthe umnikazi walesi sibhamu ungowasePinetown, KwaZulu-Natal.
UNaidoo uthe la madoda abe esekhalelwa ngamasongo kaSigonyela kanti kulindeleke ukuba avele enkantolo ngoMsoimbuluko ngecala lokutholakala nesibhamu esebiwe.